China sy ny orinasa mpanamboatra tavoahangy vita amin'ny varahina roa Newera
Item endri-javatra sy ny fampiasana Code Performance
hanampy Adhesive hatevin'ny foil (mm) hatevin'ny adhesive(MG) Elongation% 180°hery peel N / 25mm Tack Rolling Ball cm Hafanan'ny serivisy °C fanoherana herinaratra
conductive tokana kasety foil varahina ny varahina varahina ho toy ny fitaovana fanohanana, nopetahany adhesive mora tohina amin'ny tsindry acrylic. Applications: ampiasaina indrindra amin'ny fanafoanana ny electro-magnelic fitsabahana EML, maningana ny fahasimban'ny onja elektro-andriamby amin'ny vatan'olombelona. Izy io dia mihatra indrindra amin'ny fitaovana solosaina tariby solosaina, fampisehoana solosaina, mpanamboatra mpanova. lafiny roa misy karazana conductive misy. xsd-scpt foil varahina acrylic 0.018mm-0.075mm 0.03mm-0.04mm 14 18 12 -20 ~ + 120 0Ω
conductive roa kasety foil varahina xsd-dcpt foil varahina acrylic 0.018mm-0.075mm 0.03mm-0.04mm 14 18 12 -20 ~ + 120 0,04Ω
Ny insulation, insulation heat, tantera-drano, firaiketam-po tsara, dia afaka manafoana ny fanelingelenana elektromagnetika, manala ny voka-dratsin'ny onja elektromagnetika amin'ny vatan'olombelona, ​​manalavitra ny herinaratra na ny onja misy fiantraikany amin'ny asa.
Izy io dia mety amin'ny famokarana milina, tariby, jacks ary motera isan-karazany, ary koa fiasa manokana hisorohana ny sifotra sy bibikely hafa.
Ny varahina varahina dia manondro tady varahina manify, matetika tohanan'ny adhesive. Ny varahina varahina dia hita amin'ny ankamaroan'ny fivarotana fitaovana sy zaridaina ary indraindray fivarotana elektronika. Ny varahina dia ampiasaina mba hitazomana ireo slug sy snailsout amin'ny faritra sasany ao amin'ny zaridaina, zavamaniry misy vilany, ary vatan-kazo misy voankazo, sy hazo hafa sy hazo kely. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fampiharana hafa, toy ny fiarovana elektromagnetika na tsipika fampitana haino aman-jery ambany amin'ny alàlan'ny elektronika sy amin'ny famokarana jiro tiffany. [Citation ilaina] Izy io dia miseho amin'ny endrika roa; adhesive conductive et non conductive adhesive (izay mahazatra kokoa).
Previous: Tape vita amin'ny varahina voapaika
Manaraka: Tape vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina tokana
Tape Fiadiana amin'ny varahina
kasety foil varahina
Tape foil vita amin'ny varahina miaraka amin'ny fametahana konductive
Tape-drakitra vita amin'ny varahina roa sosona